Fanontaniana maro no nipetraka manodidina izany tahaka ny hoe “iza no hanamarina ny volam-panjakana izay volam-bahoaka ihany koa? Sao dia hanjaka ny kolikoly?” Tao koa no filazana fa nisy ambadika politika izany satria sesilany ny vola niditra noho ny aretina coronavirus. “Tsy misy hidiran` ny politika ao ambadiky ny fanafoanana ny didy fanendrena ny tale jeneralin` ny “controle publique” sy ny tale misahana ny “comptabilité publique””, hoy ny minisitry ny toekarena sy ny vola. Tsy misy afenina, hoy Richard Randriamandranto hatrany. Nanamafisin’ny praiminisitra Ntsay Christian ihany koa fa ara-dalàna ny dingana sy fepetra noraisina. Raha tsiahivina fa ireo Tale Jeneraly ambony nesorina ireo no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampidirana sy ny famoaham-bolam-panjakana ary indrindra ny fanaraha-maso izany.